Ahoana ny fomba famoronana bilaogy mahandro amin'ny dingana 3 | ThermoRecipes
Ahoana ny fomba famoronana bilaogy mahandro amin'ny dingana 3
Tianao mamorona bilaogy fandrahoan-tsakafo ho anao manokana ary tsy hainao ny fomba? Aza manahy, avy eo, ao Thermorecetas, izahay dia hanampy anao amin'ny famoronana bilaogin-tsakafo mahandro amin'ny 0 sy in Dingana 3 mora azon'ny rehetra atao izany na dia tsy manana fahalalana momba ny Internet na teknolojia aza izy ireo.
Misafidiana sehatra iray
Ny zavatra voalohany ilainao hananganana bilaogy mahandro dia safidio ny sehatra tianao hampiasaina. Ny sehatra dia ny sarinao sy ny marikao amin'ny Internet ka io dia teboka tena ilaina ary ilaina ny mandany fotoana hisafidianana izay tsara, satria afaka manova azy ianao any aoriana any nefa asa sarotra izany ary ilaina amin'ny manam-pahaizana manokana hanampy anao.
Ny fisafidianana sehatra tsara ho an'ny bilaoginao no zava-dehibe
Torohevitra vitsivitsy hisafidianana sehatra tsara ho an'ny bilaoginao:
Misafidiana anarana hoe Mora tadidiana, midika zavatra izany. Ohatra, raha ny anaranao dia mety ho toy ny lasrecetasdesara.com na mitovy aminy.
Miezaha hanao ny sehatra fohy araka izay azo atao satria io dia hanamora ny fitadidiana.
Lna mazava kokoa araka izay azo atao. Raha miresaka momba ny fandrahoan-tsakafo ny bilaoginao, dia tsy maintsy hazavain'ny anaran'ny domain mazava amin'izay mamaky azy fa bilaogy resipea io.
Ampidiro teny lakile ao anatin'ny sehatra. Raha mikasika ny tsindrin-tsakafo ny blôginao dia andramo ny mametraka ny teny hoe "desserts" ao anatin'ny fonenanao, toy ny todosmypostres.com na mitovitovy.
Ampiasao ny .com extension, satria io no be mpampiasa indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Amin'ny tranga fanaovana tranokala ho an'i Espana ihany no ahafahanao misafidy extensions .es fa tsy mampiasa extensions tsy fahita firy na fanitarana avy amin'ny firenen-kafa.
Raha vantany vao manana ny anarana voafidy isika dia ny dingana manaraka dia soraty amin'ny anaranao izy. Eto ny tolo-kevitray dia ny hampiasa Godaddy, satria izy no iray amin'ireo sehatra izay tolotra tsara indrindra ary miaraka amin'ny antoka rehetra. Raha hisoratra anarana ny fonenanao dia mila fotsiny kitiho eto, apetraho ilay anarana nofidianao (jereo aloha fa tsy misy izy, satria raha misy izy dia tsy maintsy mitady anarana hafa) ary mandoa azy.
Izao koa dia manana ianao tolotra manokana nahoana ianao no afaka mividy domain .com 0,85 € fotsiny amin'ny fipihana eto
Dingana hividianana sehatra
Amin'ireto pikantsary manaraka ireto dia ho hitantsika ny dingana tsirairay hividianana sehatra eo amin'ny sehatra Godaddy.
Dingana 1 sy 2
Ampidiro ny tranokala godaddy, soraty ny anaran'ny sehatra ary kitiho ny bokotra fikarohana raha toa ka misy ilay domba na tsia.
Raha misy ilay sehatra dia vintana ianao. Tsindrio izao ny bokotra select.
Tsindrio ny bokotra tohizo ny sarety hanohy amin'ny fizotry ny fividianana.
Dingana 5 sy 6
indica ny isan'ny taona te-hividy ny sehatra ianao (manolotra 2 taona farafahakeliny izahay) ary tsindrio avy eo "manohy ny fandoavam-bola". Avy eto dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny tranokala ihany ianao ary afaka manao ny fandoavam-bola mora amin'ny carte de crédit na paypal.
Ary dia izay. Inona izao efa manana ny domain ianao nividy dia ho hitantsika ny dingana manaraka: ny fampiantranoana.
Misafidiana fampiantranoana tsara
Raha vantany vao manana sehatra isika dia ny dingana manaraka dia mividy fampiantranoana tsara. Amin'ity tranga ity, ny tolo-kevitray dia ny fampiasana ny serivisy an'ny Raiola Networks izay mpamatsy espaniola izay manolotra serivisy kalitao amin'ny vidiny lafo ary miaraka amin'ny fanohanana 100% amin'ny Espaniôla. Midira amin'ny tranokala Raiola ary manakarama fampiantranoana tsara indrindra tsindrio eto. Manana fampiantranoana tsara ianao amin'ny € 2,95 isam-bolana!
Dingana hividianana fampiantranoana
Te hividy sehatra iray, hanazava tsikelikely ny fomba hividianana fampiantranoana tsara izahay.
Ampidiro ny tranokala Raiola ary tsindrio ny menio Hosting> fampiantranoana WordPress.
Safidio ny drafitra fampiantranoana izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao. Ity ny tolo-kevitray mividy ny drafitra amin'ny € 6,95 isam-bolana ho an'ny tena matanjaka amin'ny vidiny mirary.
Dingana 4, 5 ary 6
Soraty ny anaran'ny sehatra izay novidinao taloha ho an'ny tranonkalanao. Ao amin'ny teboka faha-5 dia mila manondro ianao fa te-hametraka WordPress (asaina apetraka foana ny kinova farany) ary ho dingana farany dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra Alaharo ny baiko. Manomboka eto dia mila mamita ny fisoratana anarana ho mpanjifa vaovao fotsiny ianao ary dia izay.
Raha vantany vao eto isika dia efa nividy ny sehatra sy ny fampiantranoana.
Mametraha mpitantana atiny
Raha vao amin'io fotoana io dia ny dingana manaraka dia mametraha mpitantana atiny afaka mamoaka recette ao amin'ny bilaoginao. Eto dia tsy misy fisalasalana, ny tolo-kevitra mety indrindra dia WordPress, ilay fitaovana mitantana ny ankamaroan'ny bilaogy manerantany ary izay ihany koa no ampiasainay ao amin'ny Thermorecetas (Fanamarihana: WordPress dia azo apetraka ho azy eo amin'ny dingana fividianana fampiantranoana, fa raha sanatria ka holazainay aminao ny fomba hanaovana azy any aoriana).
Mba hametrahana WordPress amin'ny fampiantranoana vaovao dia tsy mila fahalalana teknika akory ianao. Raiola dia manana fitaovana napetraka amin'ny alàlan'ny default izay mamela anao mametraka WordPress amin'ny tsindry 4 mora be. Raha te-hahita ny fomba anaovanao azy ianao dia ity misy horonan-tsary manazava tsikelikely ny fizotrany.
Mamolavola ny bilaoginao
Saika vonona ny bilaoginao izahay. Izao ihany no ilainao mahazo famolavolana izay tianao ary ho vita ny zava-drehetra. Rehefa mitady famolavolana dia manana safidy roa isika:
Mampiasà a famolavolana maimaim-poana: WordPress dia manana endrika maimaim-poana an-jatony izay azonao apetraka mora foana amin'ny bilaoginao ary manomboka mampiasa azy ireo. Ny anarany teknika dia lohahevitra ary ahitanao ny katalaogy iray manontolo miditra amin'ity pejy ity.
Mampiasà a famolavolana fandoavam-bola: Ity no safidy mety indrindra hatrizay mihoatra ny 40 dolara kely afaka manana endrika tena matihanina amin'ny bilaoginay izahay. Avy eo hasehoko anao ny sasany.
Lohahevitra WP ho an'ny fomba fahandro
Izy io dia endrika matihanina tena ary tonga lafatra nohamarinina ho an'ny bilaogy resahina. Azonao atao ny misintona azy amin'ny $ 48 tsindrio eto.
Lohahevitra WordPress Sakafo & Resipeo
Volavola iray hafa natao manokana ho an'ny bilaogy fandrahoan-tsakafo. Inona koa mampifanaraka tanteraka amin'ny finday sy ny takelaka noho izany ny bilaoginao dia ho tsara tarehy amin'ny karazana fitaovana rehetra. 48 $ ihany ny vidiny ary azonao atao ny mividy azy amin'ny fipihana eto.
Vantany vao tonga amin'ity teboka ity ianao dia manana ny bilaoginao ary mila manomboka mamoaka ireo fomba fahandro voalohany fotsiny ianao.
Eto izahay dia hanome tetika vitsivitsy anao hahombiazanao amin'ny tranokalanao vaovao.
Ahoana ny fananganana bilaogy lakozia mahomby?
Mahazoa bilaogy mahandro fahandro mahomby!
Ilaina ny sary ao amin'ny bilaogy mahandro. Tsy maninona na mahafinaritra ny fomba fahandro anao raha tsy kalitao ny sary miaraka aminy. Mila maka sary manintona be ianao ary amin'izany misy toro-hevitra mahasoa sasany toy ny fampiasana background tsy miandany (fotsy kokoa), takelaka endrika vaovao ary manome fikitika manokana. Mazava ho azy, tadidio foana fa ny fomba fahandro dia tokony ho mpiorina amin'ilay sary.
Manampia mari-drano miaraka amin'ny anaran'ny bilaoginao amin'ireo sary. Hanampy ny mpamaky anao hahatadidy ny tranokalanao izany ary hanakana ny tranokala hafa tsy hampiasa azy ireo raha tsy mahazo alalana aminao.
Araho a lamina mitovy haka ny sary rehetra (mitovy habe, fiaviana miloko mitovy, sns.) mba hahafantaran'ny mpampiasa anao ny fombanao.
asio iray sarin'ilay lovia vita teo am-piandohan'ny resipeo. Avy eo raha tianao dia azonao atao ny mametraka sary anatiny miaraka amin'ireo dingana mpanelanelana hanaraka azy, fa ny sary voalohany hitan'ny mpamaky hatrany dia tsy maintsy atao amin'ny fomba fahandro efa vita.
Omeo ny mikasika manokana ny fomba fahandro. Ao amin'ny Internet dia misy resipeo an'arivony maro ka raha hanavaka ny tenanao ianao dia tsy maintsy manampy lanja ny mpamaky anao. Omeo ny fikasanao manokana ny lovia tsirairay dia hahazo mpihaino mahatoky ianao izay hamaky anao isan'andro.
Mampiasà a feo akaiky. Ny namakinao dia namanao, miresaka aminy toy ny hoe sakaiza maharitra mandram-pitiavana izy ireo. Azo antoka fa hankasitraka izany izy ireo!
Ary izay ihany !. Tsy misy afa-tsy maniry anao izahay mirary soa amin'ny bilaoginao vaovao ary enga anie ianao hahita fahombiazana maro.